Indlela yokuxuba i-trenbolone i-acetate powder eluhlaza? | Yenza i-Tren ace powder
/Blog/I-Trenbolone Acetate/Indlela yokuxuba i-trenbolone e-acetate powder ehlaza?
ezaposwa ngomhla 01 / 16 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo I-Trenbolone Acetate.
1. Iyintoni i-trenbolone acate aceate powder 2.Kusebenza njani i-Tetbolone i-Acetate powder work
3.Hlanganisa njani i-trenbolone e-acetate powder eluhlaza 4.Trenbolone Aceate Effects
5.Trenbolone I-Acetate yehafu yesibini 6.Usebenzisa njani i-Trenbolone Acetate
7.Trenbolone I-Acetate imiphumela emibi 8.Buy Trenbolone i-acetate powder online
1. Iyintoni i-trenbolone acate aceate powder
I-trenbolone acetate powder iziphambili ezisisiseko ze-trenbolone acetate. I-trenbolone e-acetate powder i-powder yellow, i-CAS No. 10161-34-9, i-Formula ye-molecular: i-C20H24O3, isisindo somzimba: i-312.4, i-Melt Point: i-90- 92ºC, i-XMUMX-0 ° C.
I-Tetbolone Acetate yaqaliswa ngabavelisi baseFrentshi kwi-1980s, kodwa ekuqaleni yayifumaneka kuphela kubagqirha bezilwanyana. Abagqirha bezilwanyana bajobile i-steroid kumahashe angenawo amandla ambalwa, abonakala bebuthathaka okanye bengenazo iintlungu ezinamandla.
Emva kokuba umenzi wasemveliso wayeke ukwenza i-steroid, ezinye iinkampani zenyuka kwi-bandwagon. Abo bavelisi basebenzisa isichengisiso ukwenzela ukwandisa inani lemfuyo ekhoyo kwiinkomo eziqhelekileyo. Abalimi belizwe lonke befumene ukuba ukunikezela iinkomo zabo imihla ngemihla kunokubanika inyama kunye nokwandisa inzuzo yabo. Abakhi bezakhiwo kunye nezinye iindidi zabadlali abaye basebenzisa i-trenbolone acetate ukuze banikezele izikhwebu ezinamandla kwaye ziphilile. I-trenbolone Acetate idume ngokuba yenye ye-anabolic steroids eqinile kwihlabathi. Kusebenza ngokukodwa kwiimeko zokuphucula ukusebenza.
I-Raw Trenbolone Petder, ubumsulwa> 98%
igama I-Trenbolone i-Acetate powder, i-tren A powder
Inombolo yeCAS 10161-34-9
I-Molecular Formula C20H24O3
Isisindo somzimba 312.4
ukugcinwa Temp 0-6 ° C
Apperance Powder ephuzi
2. Usebenza njani i-Raw Trenbolone Acetate powder
I-Raw Trenbolone i-acetate powder ibonwa njengenye yeemveliso eziqinileyo kummandla walo wesenzo, ezinokuthi zenze izibonelelo ezininzi. Abanye abagijimi bathiwa ngumlawuli okanye ukumkani kwihlabathi elifanayo lamalungiselelo. I-Tawbrenone i-Acetate powder inezinye izakhiwo ezibopheleleyo. Oku kuvumela i-steroid ukuba ifumane i-androgen receptors emzimbeni kwaye ifakelele kulawo macandelo. I-Testosterone iya kufakelwa ngokuzenzekelayo kwi-receptors, kodwa uphando lubonisa ukuba i-Tren Acetate yakha isibophelelo esingcono kunye nama-receptors kune-testosterone. Ezi nkcukacha zothutho lokufumana izithuthi kwezinye iindawo zomzimba.
Xa ama-receptors ekhula bejwayele ukwenza utshintsho olutsha, abo bafumana i-receptors baya kunyanzela umzimba ukuba wenze ngezindlela ezahlukeneyo. Ukusetyenziswa kwe-steroid kunokutshintsha indlela umzimba osebenza ngayo amaprotheni nama-carbohydrates. Esikhundleni sokuguqula ezo zithako zibe ngamanqatha, umzimba uyakha izihlunu ezivela kwezo zinto. I-Tren i-Acetate powder iphinda ibeke umzimba ukuba ungadli ukutya ube ngamafutha amaninzi kwaye ukhusela ukugcinwa kwamanzi. Ezinye iindidi ze-steroids zibangela ukuba izihlunu zifumane amanzi amaninzi, oku kungakhokelela ekuzuzeni ubunzima. I-Tren i-Acetate powder iyasebenza ngakumbi kune testosterone xa isetyenziswe kakuhle kwaye ngokwemiqathango. Ukwamukela umjikelo we-Trenbolone Acetate umjikelo ungomnye wemigangatho ephakamileyo kunoma yimuphi umqhubi wokusebenza ukwenzela ukuba ufikelele kwiziphumo ezifunayo ngokukhuselekileyo kunye nexesha elifutshane.
3. Indlela yokuxuba i-trenbolone e-acetate powder eluhlaza
Tren Acetate powder idume ngokuba yenye ye-anabolic steroids eqinile kwihlabathi. Kusebenza ngokukodwa kwiimeko zokuphucula ukusebenza. Ngaphezu koko, i-trenbolone acetate nayo enye yezona zinto zixhaphake kakhulu kuba isebenza kakuhle ngokubhikisha nokujikeleza ngokufanayo. Abantu abaninzi bafumana i-trenetolol acetate powder kwi-intanethi, kwaye kulula ukuthenga i-trenbolone i-acetate powder online. Kodwa indlela yokuxuba i-trenbolone i-acetate powder eluhlaza xa uthenga i-trenbolone acetate powder online? Nantsi iresiphi yesithenjwa. Ngaphambi kokuba udibanise i-trenbolone acetate powder (i-trenbolone acetate homebrew), kufuneka ukwazi ukuba yintoni na yintoni oyenzayo, kwaye ingozi. Ungazami i-trenbolone actate homebrew ukuba awukwazi nto malunga ne-trenbolone acetate.
Ziziphi izinto ozifunayo ukulungiselela njengendlela yokuzimela:
Tren Acetate 100mg /[Imeyile ikhuselwe]
5g Tren i-Acetate powder
I-35ml i-oli yembewu yamagilebhisi
I-Trenbolone i-acetate homebrew inyathelo ngesinyathelo:
Gqiba i-steroid powder kwi-beaker yeglasi njengoko kuboniswe ngasentla, yongeza i-Benzyl Alcohol kunye ne-Benzyl Benzoate
Iisombululo ziza kuqala ngokuqhekeza i-powder kodwa ukuze kuqhutywe inkqubo ngokukhawuleza ukuba kusetyenziswe amanzi okuhlamba. I-intlanzi i-vial ibe ngamancinzana ambalwa emanzini epanini okanye into efanayo: kubalulekile ukuba ungasebenzisi amanzi ashushu kakhulu kuba oku kuya kubangela ukuba ezinye iimveliso zenze i-150f ibushushu obuhle bokusetyenziswa, mhlawumbi amanzi abilisiwe kwi-kettle . Ioli ephathekayo kufuneka ibe liqondo elifanayo kunye nesisombululo xa sithengiswa ngoko ukuba ufudumala isisombululo kwindawo yokuhlambela amanzi kufuneka ufanane neoli. Injongo kweli nqanaba liphela ukuphelisa ngokupheleleyo i powder kwiingxube. Akufuneki kubekho "iHormone swirls" okanye nayiphi na ipowusi ebonakalayo esele kwisisombululo kwaye xa oku kuphunyeziweyo kuqhubela phambili kwisinyathelo esilandelayo.
Yongeza ioli yeoli yefudusiweyo isisombululo, le meko i-35ml kufuneka ifakwe. Hlanganisa kwakhona kwakhona, akufuneki kubekho i-hormone e-swirls-xa oko kwenzeka kwenzeka kususwe ngokukhawuleza kumanzi okuhlambela amanzi kwaye uqhubekele kwinkqubo yokucoca.
I-powder steroid ichithwe ngokupheleleyo kwi-solvents, i-oyile yenkampani yongezwa kwaye imveliso ilungele ukucoca.
Yenza izisombululo kwisirinji oya kuluhluza kunye, oku kungaba yipiriti enye okanye oku kunokuphindaphindiweyo kaninzi kunye nesirinji encinci. Susa isihlungi se-synde ye-0.22um oyinyumba ekupakeni kwayo kwaye ulungise inaliti eluhlaza kwinqanaba elincinci uze usebenzise kwisirinji.
Sula umphezulu webhubhu oyinyumba kunye ne-Alcohol swab uze ufake inaliti eluhlaza kuyo, faka inaliti ifakwe kwisihlungi se-syringe kwi-vial.
Qaphela: Inaliti yesibini iyalinganisa uxinzelelo njengoko isisombululo singene kwi-vial. Faka uxinzelelo kwi-syringe plunger kwisihlungi umxube. Le yinxalenye ebaluleke kakhulu yale nkqubo yonke njengoko yinto eyenza umkhiqizo wakho ubonakalise. Zonke ii-steroids ezigqityiweyo ukusuka kwileyiphi lebhu ye-steroid kufuneka ihambe kule nkqubo.
Ngamanye amaxesha umntu unokufumanisa ukuba uluhlu lwefayile luyekile okanye ukuba inkqubo iyancipha kakhulu-iyamkeleka ukubuyisela isihlunu kunye ntsha xa kwenzeka ukuba ulondoloze ixesha. Ixesha elithathayo ukucoca i-steroids lixhomekeke kwiyiphi i-steroid eyococa kunye nokuba lukhulu kangakanani i-filtere, kunye ne-mg / ml yemveliso.
Xa umkhiqizo ucocelwa kwintsimbi engummiselo inkqubo iphelile.
Inkqubo yonke ngasentla ithathe imizuzu engama-40 kwaye ifuna ubuchule bezakhono. Kule mzekelo 50ml ye-Tetbolone Acetate kunye nexabiso lezitalato malunga nama-$ 747 yenziwa ngexabiso elipheleleyo lokuvelisa i-$ 100-inzuzo ekhethekileyo / umgca wokugcina. Yingakho abaninzi benjengomzimba womzimba bathanda ukuthenga i-trenbolone i-acetate powder online kunye nokwenza i-trenbolone acetate. Kodwa ukuba ngokubuyisela kwakhona, usenokufuna ukuwafaka kwiibhola ze-10 ml ezimbi.Kubungakanani obunjenge-1 ilitha, ungasebenzisa iifayile zentsimbi eziyinyumba, kodwa ubuninzi obuninzi njengama-liters, unokufuna ukuthenga i-solvent filtration apparatus.
4. I-Trenbolone Aceate Effects powder
kuba i-trenbolone acetate, i-Acetate ye-tren iziphatha njengezinye i-anabolic steroids ezininzi. Iyakwandisa amandla omzimba wakho wokwenza iprotheni kwaye inceda izicubu zakho zomzimba zigcine i-nitrogen eninzi. Xa umzimba wakho unako ukudala iiprotheni ngokukhawuleza, kwaye xa isakhiwo sithintela ezo proteins (oko kukuthi i-nitrogen) ziyafumaneka ngobuninzi, unokufumana ukukhula kwemisipha kwinqanaba le-epic. Ngaphandle kwalokhu, i-Trenbolone Acetate iya kusebenza ekukhuthazeni i-insulin-like growth factor, enoxanduva lokulungisa kunye nokuvuselela izicubu emzimbeni wakho. Kananjalo kwandisa inani elibomvu legazi; kunye neeseli ezibomvu zegazi, unokuphucula ngakumbi i-oxygenate imisipha yakho kwaye ubonelele ngendawo ebalulekileyo yokukhula.
5. I-Trenbolone i-Acetate ipowder half half life
Uninzi lwabagijimi bayayifaka i-trenbolone eline-chain ester ehlanganiswe kuyo, kwaye akude kube yilapho i-plasma iphosa egazini legazi iyanamathela kwi-chain ester ethi i-trenbolone ikhululekile ukusebenzisana ne-androgen receptors kumaseli omzimba. I-trenbolone ye-acetate yehafu ye-acetate i malunga neeyure ze-48, ngelixa i-enanthate version i malunga ne-5-7 imihla.
6. Indlela yokusebenzisa i-Trenbolone i-Acetate powder
Umntu ocingisisa umjikelezo we-Trenbolone Acetate kufuneka azi ukuba banamathuba ambalwa atholakalayo kubo. Nangona kuthathwa njengendlela ephakamileyo yokukhupha, kubuye kuhlanganiswe rhoqo kwisenzo sokusika. Kungakhathaliseki ukuba umsebenzisi uyaphi, le steroid enamandla efuna ulwazi oluchanekileyo malunga nendlela olusebenza ngayo. Kodwa into ebaluleke kakhulu ukuyikhumbula yile, Inokuba nemiphumo emibi yempembelelo.
● I-Trenbolone i-acetate powder umjikelo wesiseko:
Ngexesha lomjikelezo oyisiseko, umlinganiselo ofanelekileyo kufuneka ube ngu-50mg ngalunye usuku, yonke imihla ehambayo. Oku kungaguqulelwa kwi-75mg yonke imihla ehambayo xa umzimba wakho ubonisa ukunyamezela i-50mg dosage. Kwiimeko eziqhelekileyo, ixesha elifanelekileyo lokusetyenziswa liqhelekileyo kwiiveki ze-8 nangona iiveki ze-12 nazo zamkelekile kungakhathaliseki ukuba idosi esetyenziswayo. Qaphela ukuba, iphakamileyo le dose liphakamileyo umngcipheko wemiphumo ebalulekileyo.
Ukuba ufuna ukusebenzisa i-steroid kwiiveki ze-12, kukuhlala kukuhle ukuba ube nolwazi olune-hormone okanye ubandakanyeke ukhuphiswano okanye injongo ethile. I-steroid igcina kakuhle kakuhle kunye no-Dianabol kunye ne-testosterone ngexesha lojikelezo xa ungenayo imisebenzi ethile. I-Tren inokuthi ifake kakuhle kunye ne-testosterone okanye enye i-anabolic steroids equka u-Anavar no-Winstrol ngexesha lokunquma.
● I-Trenbolone i-Acetate powder umjikelezo ophezulu:
Ukuba unamava nge-steroid, umjikelezo ophezulu uya kuba kuhle kuwe. Iqala nge-100mg yonke imihla ehambayo kodwa kwiimeko ezininzi, kunokwenzeka ukuba ulungelelanise amanqanaba omlinganiselo kwi-100mg nganye ngosuku ngexesha lokusetyenziswa. Kodwa akunakucetyiswa ukusebenzisa i-trenbolone acetate imihla ngemihla ukuba ungumdlali we-off-season njengoko le kuya kubangela kuphela uxinzelelo oluthile olungasimfuneko. Nangona kunjalo, unokusebenzisa i-100mg yemihla ngemihla ngexesha lokutya kwaye ngokukodwa kufutshane nemincintiswano yakho.
Umjikelo ongcono we-Trenbolone umjikelezo we-acetate yexesha elide liza kuba yi-100mg yonke imihla ehambayo kwaye idibaniswe kakuhle kunye neTestosterone kunye neDbol. Indlela edibeneyo isinconywa kubasebenzisi abaphambili, oko kuthetha ukuba unako ukuxhasana ne-Deca-Durabolin kunye ne testosterone kwiiveki ze-12.
I-Deca kufuneka ihoxiswe ngeveki ye-12 kwaye unamathela kwiTestosterone neTrenbolone kuphela. Kukho iindlela ezingenammiselo xa kuziwa ekunqumeni umjikelezo we-Trenbolone umjikelezo we-acetate okanye ukutya ukutya kwaye oku kuya kunandipha. Iingcebiso ezilungileyo kukuhlala ukhetha ukhetho olufanelekileyo olufanelekileyo kwaye ulisebenzise i-steroid njengenconywayo.
7. I-Trenbolone i-Acetate powder effects
Kwinqanaba elithile, kukho umrhumo kwimiphumo emibi ekufuneka ihlawulwe kulo, kodwa kungekudala ukuba abaninzi bacinga. Nangona abambalwa befumana ingxaki ye-trenbolone ngenxa yezizathu zokunyuka kobudlova, ubusuku bobusuku, okanye ukunciphisa ukusebenza kwe-aerobic, baninzi bafumana ezi ziphumo zecala kwaye zilawulwa lula, okanye zingekho kuzo.
8. Thenga i-trenbolone i-acetate powder online
I-Trenbolone Acetate yenye yezonabolic steroids ezinamandla kakhulu ezinamandla okuphucula ukusebenza ikakhulukazi kubadlali kunye nabakhi bomzimba. Futhi i-trenbolone acetate homebrew inokugcina iindleko zakho kwaye ufumane umgangatho ophezulu we-trenbolone acétate. Abaninzi bemizimba okanye abagijimi bafuna ukuthenga i-trenbolone i-acetate powder kwi-intanethi, ngoko ukwenza injectable trenbolone acetate ngokwabo. Xa uthenga i-trenbolone acetate powder online, kufuneka uqaphele ukuba umthengisi we-trenbolone i-acetate powder anganika umgangatho ophezulu we-acetate powder. Musa ukujonga kuphela ixabiso, akunakwenzeka ukufumana i-qualtiy trenbolone acetate powder ngexabiso eliphantsi, nangona ixabiso le-trenbolone ye-acetate lihluke kakhulu kwimarike. Ngaphambi kokuthenga i-trenbolone acetate powder ukusuka umthengisi we-trenbolone acetate powder kwi-intanethi, unokucela umqulu ukuqinisekisa ukuba umgangatho we-powder ye-tren ephezulu. Okanye wenze isilingo sovavanyo kuqala xa ungakholelwa loxwebhu. Ngolunye uninzi lwengxelo yokuvavanywa kwilebhu edumileyo, umphumo wokuvavanya unokuzihlolisisa ngokwakho kwibhan, ingxelo enjalo yokuvavanya inokuthenjwa ngakumbi.
tags: i-trenbolone eluhlaza i-acetate powder, i-trenbolone acetate powder
Iinkcukacha eziphezulu ze-5 malunga nophando lwe-Cialis powder Thenga i-Modafinil powder: Ukutshisa okutshisayo izidakamizwa omele uzazi!